निर्विरोध निर्वाचित भए यी ठाउँमा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
निर्विरोध निर्वाचित भए यी ठाउँमा
मंगलवार, असार ६, २०७४ १३:०८ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ, असार ६ गते । दोश्रो चरणको निर्वाचनमा देशका विभिन्न भागमा जनप्रतिनिधी निर्विरोध निर्वाचित भएका समाचार प्राप्त भएका छन् ।
रामपुर (पाल्पा)– पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–३ झिरुबासमा दलित महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । नेकपा (एमाले)बाट दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएकी कुमारी विक निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो ।
दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको जिल्लाका ४३ वडामध्ये बाँकी ४२ वडामा ११६ जना दलित महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: राजपाकै समझदारीमा निर्वाचन सारिएको हो : नेता निधि
NEXT POST Next post: प्रधानमन्त्रीले विद्यालयस्तरदेखि नै योगाभ्यास जरुरी देखाउनुभयो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, असार ६, २०७४ १३:०८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, असार ६, २०७४ १३:०८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, असार ६, २०७४ १३:०८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, असार ६, २०७४ १३:०८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, असार ६, २०७४ १३:०८